Fanalavirana ara-tsosialy: resy i Hawaii, DC mitarika any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fanalavirana ara-tsosialy: resy i Hawaii, DC mitarika any Etazonia
Vaovao Mafana US • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Hotels & Resorts • Vaovao • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
voatifitra sary 2020 04 03 ao amin'ny 10 36 37
Etazonia dia manana naoty D mampivarahontsana noho ny elanelana amin'ny fiaraha-monina
Vao tamin'ny herinandro lasa teo i Hawaii no nahazo ny isa ambony indrindra raha namoaka ny laharam-pahamehany ny Unicast noho ny fanarahan-dalàna manalavitra ny 50 any Etazonia. I Hawaii no laharana voalohany tamin'ny firenena ary nahazo ny ihany matanjaka naoty navoakan'ny Unacast Scoreboard:
Androany ny olona fahatelo dia maty tany Hawaii tamin'ny COVID-19
I Hawaii no voalohany tamin'ny fitsangatsanganana ara-tsosialy tamin'ny herinandro lasa teo
Ny isa sy ny laharam-pahamehana dia nifototra tamin'ny hetsika fanavahana lavitra ny fiaraha-monina, raha oharina amin'ny hetsika efa niasa talohan'ny COVID-19.
Tamin'ity herinandro ity dia tsy nisy fanjakana na faritany tany Etazonia nahazo naoty A, afa-tsy ny Distrikan'i Columbia (Washington DC) nahazo A-
Manerantany i Etazonia dia manana naoty D ho an'ny halavirana ara-tsosialy, izay mampatahotra tanteraka.
Hawaii niaraka tamin'i Massachusetts, Michigan, Nevada, New Jersey, New York dia nilatsaka tao amin'ny B-
Ny isa manalavitra ara-tsosialy an'i County amin'ity herinandro ity
Ao Hawaii, Ny faritanin'i Kauai dia mbola manana naoty A tonga lafatra. I Kauai ihany no faritany manana ferana amin'ny sidina sy ny curfew.
Maui County dia manana Naoty B, County County Honolulu B-, ary ny County County isa naoty C
Eritreritra an'i Dr. Anton Anderssen
Antropolojika ara-dalàna aho. Ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana dia ao amin'ny lalàna, ary ny mari-pahaizana mari-pahaizana diploma dia amin'ny antropolojian'ny kolotsaina. Mandinika trangan-javatra izay misy tongotra iray amin'ny lalàna isika ary ny iray kosa amin'ny kolotsaina - lohahevitra miady hevitra toa ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy, ny fikomiana ara-politika ary ny fanajana ny kolontsaina amin'ireo baikon'ny governemanta. Fotoana mahaliana ireo, indrindra any amin'ny paradisa. Tsy manam-paharoa i Hawaii satria fanjakana mpanjaka izy io taloha, valan'aretina niaina izay saika nanapotika ny mponina tao aminy, niaina fanonganana marobe, avy eo nampidirina amina firenena vaovao izay nitana ny toerany ho toekarena lehibe indrindra manerantany hatramin'ny 1871.
Ny mpitsoa-ponenana voalohany tao amin'ireo nosy ireo dia ny Marquesans. Nionganan'ny Tahitiana izy ireo, izay niantso ny mponina nandresy azy ireo hoe manahune (sarambabem-bahoaka) ary namadika ny ankamaroany ho andevony. Roa taona lasa izay, fanisam-bahoaka tamin'ny 1820 nataon'i Kaumualiʻi, ilay "mpanjaka" ao Kaua'i, dia nanambara tamin'ny 65 manahune teo amin'ireo horonana. Nantsoina koa hoe Menehune, lazaina fa olona kely izy ireo - saingy ny habe dia kely ihany. Lehibe ny Tahisianina; nanongana mora foana ireo mponina tany am-boalohany izy ireo.
Nanjary fanjakana i Hawaii taorian'ny nipoiran'i Kamehameha, aikāne (iraka ara-pananahana sy iraka politika) ho an'ny Sefo Kalani'opu'u, teo amin'ny fahefana politika. Teraka tamin'i Kekuʻiapoiwa II, zanak'anabavin'i Alapainui i Kamehameha. Nofoanan'ny Alpainui ny Nosy Hawaii tamin'ny famonoana ireo mpandova roa ara-dalàna an'ny Sefo Keaweʻīkekahialiʻiokamoku. Nanohy ny fanonganana an'i Oʻahu, Maui, Molokaʻi, ary Lānaʻi i Kamehameha tamin'ny 1795. Tamin'ny 1810, dia nitolo-batana taminy i Kauaʻi sy Niʻihau fa tsy novonoina tamin'ny ady ny mponina tao aminy. Fantatra fa namono ny lehilahy sy vehivavy ary ankizy rehetra nanohitra azy i Kamehameha. Nantsoiny hoe Ny Fanjakan'i Hawaii ny faritany iray manontolo, ary nohamafisiny fa ny mpitondra ny Nosy Hawaii (izy) dia efa nitondra ny olona rehetra izao.
Nampiantrano fitaovam-piadiana ny any ivelany i Kamehameha - nila fitafiana sy tafondro izy mba hamonoana ireo mpifaninana aminy. Navelany hikarama an'ala ny hazo mpikarama an'ady ho takalon'ny fitaovam-piadiana. Ny any ivelany dia nitondra bakteria sy virus isan-karazany, izay tsy nahazo hery fiarovana ny mponina. Nisy valan'aretina taorian'ny areti-mandringana nandritra ny fanjakan'ny Hawaii, izay naharitra 100 taona latsaka.
Ny Marquesans (mponina teratany) dia efa novonoina tamin'ny ampahany betsaka tamin'ny fahatongavan'ilay Fanjakana. Namono olona an'arivony i Kamehameha tamin'ny fikatsahany fahefana, ary an'arivony maro hafa no maty noho ny hanoanana taorian'ny adiny. Nandritra ny taona maro, The Kingdom, amin'ny anaran'ny fitomboana ara-toekarena, dia nitondra olona avy any ivelany ho mpiasa tany aza; ary niaraka taminy ny areti-mandringana. Avy amin'ny mponina iray tapitrisa angamba tamin'ny fotoana nahatongavan'i Kapiteny Cook tamin'ny 1778, ny mponina teratany Hawaii (Tahisianina) dia nidina latsaky ny 24,000 tamin'ny 1920. Ireo antropolojika dia tsy mitovy hevitra amin'ny isan'ny teratany Hawaii (Tahisianina) nonina tao amin'ilay fanjakana tamin'ny 1778.
Nandritra ny fanjakana tany am-piandohana dia nisy karazana lalàna nantsoina hoe kapu. Ny fanavakavahana ara-tsosialy dia voarindra tsara amin'ny kolontsaina. Raha nanohina ny iray tamin'ny Ali'i (andriana ao amin'ny caste sociale) ny alokanao dia novonoina ho faty ianao. Notazomin'ny olona ny halavirany, satria heloka bevava ny vokatry ny fanakaikezana ny olona diso. Nisy kilasy ali'i iraika ambin'ny folo. I Ali'i manana ny laharana ambony indrindra dia mbola nanohy nanjaka tany amin'ireo nosy Hawaii hatramin'ny 1893, raha ny mampihomehy dia nionganan'ny coup d'état ny Mpanjakavavy Liliʻuokalani. Na iza na iza ianao dia mety misy olona tsy maintsy ankatoavinao, izay manana fahefana lehibe kokoa noho ianao, ary io fomba fiaina io dia tsy nanjavona tanteraka tamin'ny kolontsaina. Androany, ny olona manam-bola be no mitana ny toeran'ny sosialy avo indrindra.
Rehefa nilaza tamin'ny olona lavitra ny mpitondra Hawaii antsika ankehitriny dia nanao araka izay nolazaina taminy ny olom-pirenena. Fantatry ny Hawaii fa misy areti-mandringana mahafaty eo afovoany. Nanana traikefa an-jatony maro izy ireo hahafantarana ny tsy hilalaovana lalao amin'ny valanaretina. Ny lalàna sy ny kolontsaina natambatra mba hamoronana fihetsika iray izay nahatonga ny laharana voalohany Hawaii noho ny fanarahana ny elanelana ara-tsosialy. Raha mikasika ny valanaretina dia manana fahatsiarovana tena lava be ny Hawaii.
Manana faritany dimy i Hawaii. Tsy misy tranga Coronavirus any Kalawao County. Vitsy ny olona mbola naheno momba an'ity faritany ity, na koa tsy tany. Nasaina hitsidika an'i Kalaupapa any Kalawao County aho hihaona amin'ireo sisa tavela tamin'ny zanatn'ny habokana taloha, izay mbola an-tranon'ny olona maro izay natao sesitany tany hatramin'ny taona 1960. Olona 8,000 farafahakeliny no nesorina an-keriny tamin'ny fianakaviany ary nafindra tany Kalaupapa nandritra ny taona maro. Tamin'ny 1865, nandany ny Antenimiera mpanao lalàna, ary nankatoavin'ny Mpanjaka Kamehameha V ny, "Lalàna iray hisorohana ny fihanaky ny habokana", izay nanokana tany hanokanana ireo olona mino fa afaka manaparitaka ny Aretin'i Hansen. Betsaka ny olona nentina an-tsambo nankany amin'ny zanatany, avy eo noroahina ireo hazo ireo talohan'ny nahatongavan'ny sambon-dranomasina. Nasaina nilentika na nilomano ireo ory. Maro amin'ireo mponina amin'izao fotoana izao ao amin'ny Kalawao County no manana traikefa voalohany momba ny fahazoan-dàlana ho ara-pahasalamana ary manaraka ny fomba fidiovana maloto ao anatin'ny lova izy ireo.
Androany, ny governemanta Hawaii dia mandefa fampielezam-peo amin'ny fahitalavitra izay angatahina ny olona “hitokantokana.” Mety io. Ny olona dia mamaly amin'ny fomba mampisondrotra isan-karazany - toy ny fametrahana tadivavarana fotsy eo am-baravarankely mba hanehoana ny fanohanany ny asan'ny mpitsabo. Mametraka jiro krismasy amin'ny lavarangana izy ireo hanehoana fanantenana mandritra ny fotoana maizina. Manana jiro krismasy 200 eo amin'ny lavarangana aho, ary azo jerena avy eo amin'ny kilometatra iray miala azy ireo. Ny faritra lamba ao Walmart dia voafafa satria ny olona manjaitra sarontava ary manome izany ho an'ireo be antitra sy marefo. Mahagaga ny fifehezan-tena.
Mampalahelo fa faritra maro any Etazonia no tsy manana fifehezana ilaina amin'ny fiatrehana areti-mandringana. Florida dia namela mpamaky lohataona an'arivony maro hamory ny morontsirak'izy ireo tamin'ny volana martsa, ary manimba ny vokatr'izany. Ao amin'ny faritra Grant-Valkaria any Brevard County, Florida, dia nisy vondrona mpanafika miralenta na vory tsy ara-dalàna nivory fotsiny, fa nanapoaka an'i Tannerite, izay niteraka hain-trano 10 hektara. Izany no tandindon'ny afo fanariam-pako.
Ny vadiko, olom-pirenen'i Italia, dia nandositra an'i Italia indray andro talohan'ny nandraran'ny sidina tsy ho any amin'ny fireneny. I Italia no tena voa mafy. Ny namantsika sy ny havantsika dia miteny hoe: “Tsy mifehy fifehezana ny Italiana. Rehefa nanokana tany amin'ny faritra sasany ny governemanta dia maro ny olona no nanao ski satria tsy niasa izy ireo. ” Voadona mafy koa i Espana. Ny vadiko italianina dia nanamarika fa: "Afaka mamantatra fahasamihafana lehibe ianao eo amin'ny firenena Alemanina / Avaratra any Eropa Andrefana amin'ny firenena Latina / atsimo. Ny olona izay tsy nety nitondra tena no manome ny sarany ratsy indrindra. ”
Ny fihetsika ratsy indrindra hitako dia nalaina tamin'ny horonan-tsary. Ny 28 martsa, fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana iray taona dia niafara tamin'ny tsy maintsy nanaparitahan'ny polisy ilay fanangonana tsy ara-dalàna. Nahagaga ny tsy fahalalàna sy ny tsy fandraisana andraikitra nasehon'ireto "olon-dehibe" ireto. Tsy maintsy jerena inoana izy io: https://youtu.be/jRVvMoEoItU . Ireo mpiambina olona ireo dia nanevateva teny ratsy tamin'ny polisy - ratsy ny fitenin'izy ireo ka tsy azo atao pirinty akory.
Nandritra ny valanaretina gripa Espaniola dia tsy zakan'ny tompon'andraikitra izany karazana fihetsika feno fanoherana izany. Tamin'ny 27 Oktobra 1918, tompon'andraikitra manokana an'ny birao fahasalamana any San Francisco antsoina hoe Henry D. Miller no nitifitra ary nandratra mafy an'i James Wisser teo anoloan'ny fivarotana zava-mahadomelina tao an-tanàna tao amin'ny lalana Powell sy Market, taorian'ny fandavanan'i Wisser tsy hanome sarontava gripa. Tsy isalasalana fa hahita izany karazana fampiharana izany isika mandritra ity valan'aretina ity, farafaharatsiny amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta, saingy maminany aho fa hampiasa hery mahafaty ny olom-pirenena tsy miankina mba tsy hijeren'ny fianankaviana amina fianakaviana amin'ny fananana manokana. Ny varotra basy sy bala dia nisondrotra tao anatin'ny iray volana lasa, ary azo antoka fa misy antony ara-kolontsaina amin'izany. Maherin'ny 3.7 tapitrisa ny fitiliana basy vita amin'ny basy dia natao tamin'ny alàlan'ny rafitra fanamarinana ambaratonga voalohany an'ny FBI tamin'ny volana martsa, isa avo indrindra voarakitra ao anatin'ny 20 taona.
Ny fitokantanan-tena dia tsy ratsy araka ny fanaon'ny olona maro azy. Teo anelanelan'ny 1603 sy 1613, raha teo amin'ny zenith ny herin'i Shakespeare tamin'ny naha mpanoratra azy dia nakatona nandritra ny 78 volana ny Globe sy ny trano filalaovana hafa tany Londres noho ny Pesta Bubonic - izany dia mihoatra ny 60% amin'ny fotoana. Ka inona no nataon'i Shakespeare raha nitokana izy? Nanoratra ny Mpanjaka Lear izy, niaraka tamin'i Macbeth sy Antony ary Cleopatra hanombohana. I Issac Newton dia nanao ny asany lehibe sasany teo am-panokanan-tena, izany no nahatonga azy lasa SIR Isaac Newton. Nilaza tamin'ny zokiko vavy ny zana-drahalahiko hoe: "Jereo i Neny, nandritra izay taona maro izay, rehefa noteneninao tamiko hipetraka mandritra ny tontolo andro eo amin'ny sezafianao milalao horonantsary amin'ny pajama aho, dia tsy hanomana ahy ho amin'ny tontolo tena izy. Loza eo anilan'ilay reny mankaleo. ”
Eny, mbola tsy nilalao lalao video mihitsy aho. Saingy feno fankasitrahana aho fa mipetraka any Hawaii, izay ny fanajana ny halavirana ara-tsosialy no avo indrindra eto amin'ny firenena. Ankehitriny, heveriko fa hanoratra zavatra amin'ny pentameter iambic aho.
Araho ny mpanoratra Dr. Anton Anderssen ao amin'ny Twitter @hartforth ary amin'ny
Ratsy ve ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola?